एउटा खुल्ला पत्र नारायणमान बजुक्छेको नाममा - झीगु डट कम
एउटा खुल्ला पत्र नारायणमान बजुक्छेको नाममा
June 25, 2019 Razen Manandhar	7 Comments
कमरेड नारायण मान,
नारायण मान आफुलाइ विश्वको एकमात्र सच्चा कम्युनिस्ट नेता भनी ठान्दछ । म पनि हिजोसम्म हो कि भन्ठान्थें । अब विवादास्पद र सारा नेवारहरुको धर्म संस्कृतिलाई निमित्यान्न पार्ने गुथि विधेयकको बारेमा उनको विचार पढेपछि थाहा भयो यो त जड सुत्रवादी आँखा जडित दोशी चस्माले समाजलाई हेर्ने एउटा महारोगी झूरको बढो शरीर मात्र रहेछ ।
यो बूढो मानिस अहंकारी ईष्र्यालु र घमण्डी नेता भन्ने त उस्को बिगतका थुप्रै वक्तब्य र कृयाकलापले पुष्टि गरेको थियो तैपनि पुष्पलालले रोपेको कम्युनिज्मको बीउलाई नेवाःहरूको उर्वरा भुमि ख्वपदय्ेमा जगेर्ना गरिराख्ने एउता सच्चा कम्युनिष्ट नेता भनी श्रद्धाको दृष्टिले हेर्दथें, तर त्यो मेरो भ्रम मात्र रहेछ।
जतिखेर यिनी रोल्पा रूकुम तिर क्रान्तिकारी नेताको रूपमा छाईरहेको थियो त्यतिखेर म भरखर १५ वा १६वर्षको थिएँ होला । त्यतिबेला पनि मैले माउत्सेतुङको रेडबुक खोजीखोजी लुकीलुकी पढ्न जानिसकेको थिएँ । झापामा नश्लवादीहरूको नशाले चूर भएर अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूको समूले टाउको काटिरहँदासम्म म उनीहरूभन्दा पनि उग्र विचारधारा बोक्ने भैसकेको थिएँ ।
सामन्तवादको विरूद्ध लड्न झापाको जमिन्दारको टाउको होइन सामन्तवादको मूल जरो नारायणहिटीको राजतन्त्रलाई सबभन्दा पहिले समूल नष्ट गर्नु पर्दछ भन्ने सोच राख्दथेँ।
उहिलेको निरंकुशतन्त्रले झापा विद्रोहीहरूलाई जेल सार्ने नाममा सुखानीको जंगलमा लगी राजैतिक आस्थाका बन्दीहरूलाइ भागेको बहानामा कत्लेआम गरेको पनि यही आँखाले देखें । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको झापा विद्रोह नाइके र मजदुर किसानको मुक्तिको नाममा १७ हजार जनताको बली चढाएर त्यसैको रगतमा टेकी सत्तामा आसीन नेताहरूले आफ्नै राजनैतक आस्थाका सहयोद्धाहरूलाई भटाभट इन्काउन्टरको नाममा सफाया गर्दै हिँड्नेलाई विश्वको एकमात्र सच्चा बुज्रुक कम्युनिस्ट नेता नारायण मान बिजुक्छेले कसरी कम्युनिस्ट देखे होला ?
नेपाल मजदुर कसान पार्टीको साइनबोर्ड झुन्डाई बसेका बिजुक्छेले विगतमा जहिले जहिले कम्युनिस्ट नामधारीहरू सत्तामा गए, तहिले तहिले सत्तो सराप्थे र भन्थे, यिनीहरुमा त कम्युनिस्ट को “क” पनि छैन, सबै नक्कली हुन् । तर अहिले अब स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ — रोहितले रातारात यिनले तिनै कम्युनिस्टहरुको सरकारले ल्याएको गुथि विधेयकमा मात्र कसरी कम्युनिस्ट नीति देखे ?
यो घटनाचक्र देखेपछि यस्तो लाग्यो, जुन थालमा खायो त्यही थालमा हग्ने पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ आज सांच्चै देख्न पाएँ ।
भक्तपुर अर्थात् ख्वप दे नेवाःहरूको गौरवको सहर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय खुला संग्रहालय । त्यहाँ धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जोगाइ राख्ने भक्तपुरमा लायकू, देगः, सतः, पुखू, हिति सबैसबै छ । यो त देखिने कुरा हो, र त्यसको पछाडि त्यसलाई जोगाइ राख्ने अनगिन्ती गुथिहरू पनि छन् । त्यतिमात्र होइन त्यहाँ त्येसै गौरवमय संस्कृतिले जन्माएर हुर्काएर बुढो भैसकेको एउटा नारायण मान बिजुक्छे भन्ने नेवाःकै सन्तान पनि छ जसले जुन आमाको दूध चुसेर हुर्के, अनि जुन थालमा खाएर बुढो भयो आज त्यही थालमा छेर्दैछ । यति मात्र होइन ऊ त हामी सारा स्वाभिमानी नेवाःहरूको शीर झुकाउँदै नश्लबादी बाहुनहरूको तावेदारी गर्दैछ । यो सबै देखेर अबको पृथ्वी नारायण शाहको जन्मदिनमा थुक्नलाई किर्तिपुर जाउं कि भक्तपुर मनमा कुरा खेलिरहेछ ।
र अन्त्यमा धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना कसरी हुन्छ भन्ने नबुझेका व्यक्ति आगामी चुनावमा तपाइँको पत्ता साफ हुने निश्चित छ । त्यसैले जीवनको अन्तिम घडीमा मजदुर किसानको महान् नेतालाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु — गुथियारहरुलाई सामन्तवादी भन्ने सरकारले हालै गुथियारहरूको हातबाट प्राचीन र धार्मिक महत्व भएको काठमाडौं ठमेलको जग्गा खोसेर तपाइँको कम्युनिस्ट सरकारले तपाइँकै सर्वहारा किसानहरूको लागि भनेर होला, एउटा सबै सुबिधा सम्पन्न एउटा १५ तल्ले “छायाँ कम्प्लेक्स” भन्ने विशाल भवन तयार गरेको छ। त्यसको उदघाटन गर्न रिबन सहित कमरेडका सर्वहारा किसानरूको जमात लिएर आउनुस् । हामी हातमा फूलमाला र अबिर लिएर भब्य स्वागत गर्ने परखाइमा छौं ।
लेखकको फेसबुक वालबाट साभार
← गुथि विधेयक खारेज याकेत येँय् र्‍याली
नवदुर्गा देवगणया ख्वाःपायात विसर्जन यायेसिबें न्ह्यः द्यःछेँय् पिहाँ वःगु (भिडियाे) →
April 26, 2019 Razen Manandhar 0
बजार मात्रै होइन असन
May 28, 2019 सुरेश किरण 0
7 thoughts on “एउटा खुल्ला पत्र नारायणमान बजुक्छेको नाममा”
कुरा नबुझी कसैले के लेख्छ भने त्यो क्षम्य हुन्छ । किनभने त्यो उसले बोलेको होइन, उसको अल्पज्ञान र अज्ञान बोलेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनमा आएका समाचारको भरमा यस्ता अभिव्यक्ति पनि अल्पज्ञानकै परिणाम हो । त्यसकारण धेरै के भन्नु छैन । तथापि गौतमजीलाई एउटा कुरा भने भन्न चाहें–तपाईले लहैलहैमा लागेर भन्दा गहिराईमा बुझेरमात्र केही लेख्नुभएको भए क्या गज्जब हुने थियो ।
नारायण मान बिज्युक्छे को बारेमा धेरै गल्ती कुरा गरेका छन। भक्तपुर बाट नेमकिपा पतासाफ रे???तेरो त्यति तागत छ भने भक्तपुरमा जस्तै मात्र सम्पदा, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थान र पोखरी संरक्षण गरेर देखाउनु।कला , संस्कृति र परम्परा जोगाउन मा नेमकिपा र त्यसका कार्यकर्ता ले गरेका योगदानको विवेचना गर्नुस्।
नेमकिपा मजदुर र किसानको पार्टी हो।किसान र मजदुरको हितमा आउने विद्येयक होस या कानुन नेमकिपा स्वागत र समर्थन गर्दछ।
तेरो आँट छ भने ठुल्ठुला पार्टी को पटासाफ गर।सक्छौ???
संख्याले कमजोर पार्टी पतासाफ देखि डराउदैन। नेमकिपाका एक जना मात्र कार्यकर्ता बाकि रहेसम्म पार्टी देश र जनताको भलाईको लागि काम गरिरहन्छ र सेवा गरिरहन्छ।
नेमकिपा को बारेमा केहि लेख्नु र बोल्नु भन्दा अगाडि अलि अध्ययन गरेर लेख्नुस् बोल्नुस्।
गुठी विद्ययेकमा नेमकिपा ले मोहियानी हक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्दा कसैको टाउको दुखे औषधि उपचार गराउनुस्।
गुठि विद्येयक मा सम्पदा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्दा नेवा विरोधी देख्छ भने भक्तपुर बाहेकका अरु सबै नेवार मात्र नेवार हो भनि परिभाषित गर्नुस्।
भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मचाउने साला बाहुन । सचिव प्राय सबै वाहुन।
अनि राम्रो सोचले विज्युक्छे बाजेले आफ्नो विचार राख्दा बिज्युक्छे नराम्रो बन्नुपर्ने???
त्यहि नेवार हो जसले नेमकिपा लाइ ज्यापु पार्टी देख्ने र अरुको लहलहैमा आफु आफु लडेर वाहुन जिताउने।आज तिनिहरुले सम्पदा र शहर धरासायी बनाए।
यदि कोहि नेवार नेपाल र नेपालीको हित कुरा गर्छ भने त्यो हो वास्तविक नेवार।जसले जहिले पनि राष्ट्र र राष्ट्रप्रेम देख्छ।
मेरो नजरमा नारायण मान विज्युक्छे नेपालको अभिभावक हुनुहुन्छ।
एकजना विद्यार्थी ले SEE exam मा GPA 4.ल्यायो। तर यसलाई प्रतिशत मा परिणत गर्दा ९३%मात्र आयो। त्यस बिद्यार्थी ले ७%त गल्ति गरेको देखिन्छ।
गौतम दाईको पत्र पढेर मैले अनुभव गरेको कुरा मात्र हो।
तपाईले ७% गल्ती लाई देखाउनु भयो।
मैंले त ९३% सहि कुरा देखेँ।
यसमा तपाईको पनि दोष छैन मेरो पनि दोष छैन मात्र हाम्रो नजरमा फरक भएको हो।
जनताको सेवा गर्न जनताबाटै उठाएको छ चन्दा। जसको बलमा पार्टी अहिले पनि जनताको पक्षमा बोलेको छ। सक्नुहुन्छ भने तपाई पनि दिनुस् चन्दा।
पार्टी सानो या ठुलो होला तर ईज्जत सबैको समान हुन्छ। हेक्का होस्।
अन्धो मान्छेको हात्ती छमाई
Bijukchhejile dharma, sanskriti, paramparama bare pani kehi bolnu bhayeko bhaye jati huntyotara yesa bare kehi nabolnuko artha ke ho?
मित्र मानन्धरजी, कान छामौं कागको पछि नकुदौं !
नेपाल मजदुर किसान पार्टी जोताहा किसानलाई मोहियानी हक आन्दोलनसग जोडिएको पार्टी हो । व्यक्तिको जग्गा जोती आएका किसानलाई मोहियानी हक भएजस्तै गुठीको जग्गा जोती आएका किसानलाई पनि मोहीयानी हक हुनु आवश्यक छ । केही मठाधिसहरुले गुठी जग्गामा जोताहा किसानले मोहियानी हक पाए गुठी जग्गा कमाइराखेका मोही नै त्यसको मालिक हुने र गुठी मेटिने बताए । मठाधिसहरुको यो भनाई सत्य होइन । जग्गा कमाइराखेका मोहीले मोहियानी हक पाउने कानूनी अधिकार नै हो । जोताहाले मोहियानी हक पाए गुठी मासिने मठाधिसहरुको भनाई पनि झुठा हो, बरु गुठी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी मठाधिसहरु नै अर्बपति भएका छन् । गुठी जग्गा नजोतेका मठाधिस त्यही जग्गा बेचेर अर्बपति हुने अनि गुठी जग्गा पुर्खौदेखि जोती आएका जोताहा किसानले मोहियानी हक नपाउने कसरी सामाजिक न्याय होला ? कसरी सम्पदा र संस्कृति संरक्षण होला ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै समर्थन गरेको होइन । विधेयकमा उल्लेख गुठी संस्थानको सट्टा गुठी प्राधिकरण गठन नै आवश्यक नभएको अर्थात गुठी संस्थान वा गुठी प्राधिकरण खारेज गरी गुठी अन्र्तगतका सम्पदा संरक्षण र संस्कृति संचालनको आम्दानी–खर्चसमेतको जिम्मेवारी तत् तत् नगरपालिका र गाउ“पालिकालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सिंहदरबारको अधिकार नगरपालिका र गाउ“पालिकासम्म विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । टोल टोलको नीजि गुठीमाथि सरकारको कुनैपनि हस्तक्षेप नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई स्वीकार छैन । यो पनि पार्टीले स्पष्ट गर्दै आएको हो ।
मछिन्द्रनाथको रथ बनाउन बनबाट काठ ल्याउने ललितपुर बोङ्गाका ४२ घर पुतुवारहरुले पुर्खौदेखि जोती आएको मछिन्द्रनाथ गुठीको १४४ रोपनी जग्गाको मोहियानी हक पाएका छैनन् । १४४ रोपनी जग्गामध्ये २१ रोपनी दु्रतमार्गमा प¥यो तर जोताहा पुतुवारहरुले मुआब्जा पाएनन् । ५–७ रोपनी जग्गा द्रुतमार्गमा परेको एक स्थानीय विद्यालय स्थानातरण गरिदैछ । मछिन्द्रनाथ गुठीको जग्गा पुर्खाैदेखि जोती आएका पुतुवारहरुले मोहियानी हक पाउनुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मत हो । तर, सरकारहरुले पुतुवारहरुले मोहियानी हक नपाउने दावी गर्छन् । यो कसरी न्यायोचित होला र ?पशुपतिनाथ, वीर अस्पताल, स्वर्गद्धारी गुठीका जग्गा कहा“ कति छन् ? ती जग्गाका जोताहा किसान को को हुन ? उनीहरुले मोहियानी हक पाए पाएनन् ? जोताहाबाट कूतवाली उठिरहेको छ छैन ? आदिको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । गुठी संस्थान जिल्ला कार्यालय ६ वटा जिल्लामा रहेको र गुठीको कूतवाली उठाउने ६७ जिल्लामा रहेका तथ्यांक छ । गुठी संस्थानले आफ्नो मातहतका गुठी जग्गा, मठ–मन्दिर, सतल, पाटी, पौवाको संरक्षण र संचालन गर्न सकेन । यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गुठी अन्तर्गतका सम्पदा संरक्षण र संस्कृति संचालनको आम्दानी खर्चको जिम्मेवारी तत् तत् नगरपालिका र गाउ“पालिकालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
“एक सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गुठी विधेयकमा कसरी कम्युनिष्ट नीति देख्यो ?” यो प्रश्न उठाउनेहरु पनि भेटिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गुठी विधेयक ल्याउने सत्ताधारी पार्टीलाई कम्युनिष्ट ठानेको छैन भने विधेयकको पूर्ण समर्थन गरेको हैन । काठमाडौं ठमेलको जग्गामा होइन गुठीको कमलपोखरी मासेर १५ तलाको “छाया“ सेन्टर” व्यापारिक भवन निर्माण गरिएको हो । यसको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नै संसदमा पहिलो विरोध ग¥यो । एमाले–माओवादी र नेका पार्टीको नाम फरक छ, सरकारमा गएर जनविरोधी नै काम गरेका हुन । एउटा उदाहरण देशघाती महाकाली सन्धी हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सम्पदा संरक्षण, संस्कृति संचालन र जोताहालाई मोहियानी हकसम्बन्धि स्पष्ट भनाईलाई तोडमोड गरी प्रचार गरिदैछ । यसकारण सत्य, न्याय र समानताको पक्षका सम्पूर्ण नेपालीहरु भ्रममा पर्ने छैनन् ।
विशाेक डंगाेल, एक सचेत नागरिक
मछिन्द्रनाथको रथ बनाउन बनबाट काठ ल्याउने ललितपुर बोङ्गाका ४२ घर पुतुवारहरुले पुर्खौदेखि जोती आएको मछिन्द्रनाथ गुठीको १४४ रोपनी जग्गाको मोहियानी हक पाएका छैनन् । १४४ रोपनी जग्गामध्ये २१ रोपनी दु्रतमार्गमा प¥यो तर जोताहा पुतुवारहरुले मुआब्जा पाएनन् । ५–७ रोपनी जग्गा द्रुतमार्गमा परेको एक स्थानीय विद्यालय स्थानातरण गरिदैछ । मछिन्द्रनाथ गुठीको जग्गा पुर्खाैदेखि जोती आएका पुतुवारहरुले मोहियानी हक पाउनुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मत हो । तर, सरकारहरुले पुतुवारहरुले मोहियानी हक नपाउने दावी गर्छन् । यो कसरी न्यायोचित होला र ?
पशुपतिनाथ, वीर अस्पताल, स्वर्गद्धारी गुठीका जग्गा कहा“ कति छन् ? ती जग्गाका जोताहा किसान को को हुन ? उनीहरुले मोहियानी हक पाए पाएनन् ? जोताहाबाट कूतवाली उठिरहेको छ छैन ? आदिको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । गुठी संस्थान जिल्ला कार्यालय ६ वटा जिल्लामा रहेको र गुठीको कूतवाली उठाउने ६७ जिल्लामा रहेका तथ्यांक छ । गुठी संस्थानले आफ्नो मातहतका गुठी जग्गा, मठ–मन्दिर, सतल, पाटी, पौवाको संरक्षण र संचालन गर्न सकेन । यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गुठी अन्तर्गतका सम्पदा संरक्षण र संस्कृति संचालनको आम्दानी खर्चको जिम्मेवारी तत् तत् नगरपालिका र गाउ“पालिकालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
kaan nachhami kaag ko pachhi dagurai.